Ciidamo ka tirsan Guutada Kumaandooska ee DANAB oo gaaray Jowhar | Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamo ka tirsan Guutada Kumaandooska ee DANAB oo gaaray Jowhar
Ciidamo ka tirsan Guutada Kumaandooska ee DANAB oo gaaray Jowhar
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in shalay gelinkii dambe ay gaareen magaalada Cutubyo ka tirsan Ciidanka Kumaandooska Xoogga dalka ee loo yaqaano DANAB.
Ciidamadan ayaa safar dhulka ah ku tagay magaalada Jowhar, iyagoo ka ambabaxay Muqdisho, waxaana wararku sheegayaan in aanay marin dhanka wadada laamiga ah oo muddooyinkii u dambeeyay amni daro darteed loo mari waayay iyo weeraro Al-Shabaab ka geysaneysay wadadaas.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya inay arkeen Ciidamo ku hubeysan gaadiidka dagaalka iyo agabyo kale oo ku soo qulqulaya magaalada Jowhar.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in ciidankan ay ka qeyb qaadanaayn howlgalada ka dhanka ah A-Shabaab, isla markaana wixii hadda ka dambeeya ka howl geli doonaan deegaanada Hirshabeelle oo aanay horay saldhig ugu laheyn.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamadan saldhig ka sameysteen Garoonka diyaaradaha Jowhar, waxaana ay noqon doonaan Ciidanka Danab ee ka howl geli doonta qeybta Hirshabeelle.
Ciidanka Kumaandooska ee DANAB ayaa ah Guutooyin ka tirsna Ciidanka Xoogga dalka, kuwaasoo uu tababaray Mareykanka, waxaana inta badan la howlgalaan Ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya.